DAAWO SAWIRADA: Wariye Cabdulahi Cismaan oo ku dhawacmey Weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay Baladweyne oo loo qaaday Muqdisho | Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO SAWIRADA: Wariye Cabdulahi Cismaan oo ku dhawacmey Weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay Baladweyne oo loo qaaday Muqdisho
Isniin, September, 11, 2017 (HNN) Wariye Cabdulahi Cismaan Macalin oo ah Wakiil Wareedka Tvga jubbaland ee Gobolka Hiiraan oo maalintii shalay ku dhawacmey weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay Maqaayad ku tala afaafka hore ee xaruunta Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa maanta loo qaaday Magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka.
Dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalada ku yaala Magaalada Baladweyne ayaa sheegay inaysan wax ka qaban karin dhawaca wariyaha maadaam sida ay sheegeen bir madaxa kaga jirto islamarkana loo bahan yahay in loo qaado Magaalada Muqdisho.
Wariyaha Hiilnews.com ee Magaalada Muqdisho Ciise Cabdi Ciise oo isbitaalka ku booqday dhawaca wariye Cabdulahi Cismaan Macalin ayaa sheegay in xalaadiisa hadda ay soo hagaageyso islamarkana dhaqaatiirta ay la tacalayaan caafimadkiisa.
Saxafiyinta Gobolka Hiiraan ayaa u Mahad celiyay Shirkada duulimaadka Ocean oo fududeysay qaaditanka Wariye Cabdulahi Cismaan oo Ku dhawacmay Weerarkii ka dhacay Baladweyne.
Weerarkii maalintii shalay ka dhacay Magalaada Baladweyne ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux halka 15 kalan ay ku dhawacmeen kuwaaso ay ku jiran saddex Wariye waxan labo ka mid ah xalaadooda hadda ay tahay mid wanaagsan marka laga reebo Cabdulahi Cismaan Macalin oo loo qaaday Magaalada Muqdisho.